Orgasm - a ukudedelwa inkanuko. Nokho, ngamunye wethu kule izwi ke akuhileli - indiza, ukulahlekelwa ngokoqobo, ubumnandi kanye nenjabulo ...
Akwamukelwanga ukuxoxa ...
Futhi ubuhlobo bobulili ukudlala indima enkulu ezimpilweni zethu. Sex akuyona indlela kuphela ukuze ujabule - kuletha umlingani futhi likuvumela ulondoloze impilo. Empeleni, iningi lethu alazi ukuthi ewusizo ukuphila ngokobulili emzimbeni, futhi kanjani yingozi ithinta ukungabikho kukanina. Nokho, abesifazane kakhulu kuyiplanethi yethu kuze kube manje, inkinga kuyiwa - ebukhoneni umsebenzi wocansi, abaningi nje asibi eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili. Ngezinye izikhathi, lokhu kusebenza futhi amadoda, nakuba okuningi kancane njalo. Futhi lezi zinkinga afihliwe ngokucophelela, ikakhulukazi nengxenye enamandla lesintu. Namuhla sikhuluma anorgasmia in abesilisa nabesifazane futhi izindlela zokumelana isifo.
Izizathu yokuntuleka orgasm ezingabantu
Lenkinga ibuye okuningi Cishe engakuphazamisi abesifazane, kodwa futhi kwenzeka ezingabantu. Nakuba nokugcina isifiso sobulili futhi ukwakhiwa ubuhlobo bobulili akugcini orgasm. Izizathu akhe ngabikho zihlukaniswe organic psychogenic, ngoba ukwakheka orgasm ukudlala indima kanye izici bokuphila nezingokwengqondo.
izici Psychological and anorgasmia ezingabantu
Ngokuvamile, ukungakwazi ukufinyelela eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili izici icala psychogenic. Lena ukulimala ezingase kuye kwakhishwa ngenxa ukuhlukunyezwa ngokocansi noma ukumelwa okungavamile isenzo socansi, eyabonakala njengoba ingane. Ngokwesibonelo, uma lo mfana zabona contact abazali olala ngobudlova asabela ngayo indlela abukeka ngayo, e enganakile of ocansini wengane lihlotshaniswa nakho ezimbi.
Isinyathelo Oedipus futhi Electra. Abafana eneminyaka engu-eminyakeni 5-7 lapho ziyikuqala lokuqala isifiso sobulili, ogxile isibonelo sikamama. Kulokhu, abafana ngokuvamile zithi esikhathini esizayo ukushada nonina. Amazwi afana nalawa akufanele ephelezelwa ekusabeleni okungekuhle abazali, noma ekuqondeni ingane, futhi, ubulili abonakale okungalungile.
Uma kusuka kumama kuya enganeni liveza simthande ngokweqile, kungaba akha umqondo wecala ekhaphela lesi sithombe enhle yowesifazane wayemthanda kakhulu lapho usukhulile.
Ngaphezu okungenhla, sexopathologists abaningi kuholele izimbangela ukungqubuzana phakathi emzimbeni nasengqondweni.
Physiology futhi anorgasmia ezingabantu
Izizathu bokuphila bikho orgasm ngempela ezingavamile zokwelapha. Kungase kungalimala ezingeni zobuchopho futhi umgogodla intambo noma emsipheni ukhalo. Lokhu kungase futhi zihlanganisa urethritis nezinye izifo ukuvuvukala kwesimiso sokuzala.
Ngaphezu kwalokho, owesilisa anorgasmia ukwazi avuse antidepressant okuyinto ukunciphisa blood pressure, utshwala, yebo, izinguquko ubudala.
Izinhlobo orgasm zesifazane
Babalelwa ku-60% abesifazane emhlabeni zihlupheka ngenxa yokuntuleka nhlobo noma ngokwengxenye orgasm. Odokotela isehlane anorgasmia zamabanga aphansi naphezulu. Futhi uma kuqala ugcwele, ngokuvamile azalwa naso, ukungakwazi ifinyelela iqophelo ubumnandi, secondary ngokuvamile has ngenxa yezizathu eziningana.
Anorgasmia uhlobo yesibili kwenzeka ngisho kulezo zimo lapho owesifazane ahlangabezane orgasm ngesikhathi indlwabu, kodwa awufiki ke ucansi nemlingani wakho.
Phakathi kwezinhlobo main anorgasmia Uhlobo lwesibili ihlaba umkhosi:
Isimo lapho orgasm ihlolwe kuphela ngaphansi kwezimo ezithile. Ngokwesibonelo, indlwabu. Futhi lapho coital anorgasmia owesifazane ifinyelela injabulo ngezindlela eziningi, kodwa hhayi nge ocansini.
Okungatheni. Orgasm kufinyelelwe, kodwa ngaso sonke isikhathi.
Nimfomaticheskaya. Owesifazane uzizwa ukuqhanyelwa anda, kodwa akusho ukuzwa orgasm nganoma yisiphi simo.
umzimba Female yakhelwe enkulu kunokuletha zabesilisa. Ezweni labesifazane ubuswa imizwelo kanye ukulawula indlela aziphatha ngayo. Ngokuvamile, izimbangela zezinkumbulo bikho orgasm e abesifazane zisekelwe isimo ngokwengqondo.
Female kwengqondo anorgasmia
Ukwehluleka ukudalula. Uhlobo abesifazane asetshenziswa ngubani ukuzibamba futhi imizwelo yabo, ngeke sisaphumula ngokugcwele futhi uthemba umlingani wakho. Orgasm - ukuqhuma imizwa engqondweni yabo enganakile ayikuvumeli yena ukukhulula, oncibilikayo imizwa kanye ethintekayo emizweni.
ukuhlukumezeka kwengqondo. Udlame, imizwa yecala noma imiphi imibono eyiphutha mayelana nocansi, abazali zigonywe ebuntwaneni njengoba ngesenzo esiyihlazo ezingaba ukuphuca abesifazane amathuba ukujabulela ubulili. Lokhu kungaba ubutha bayazi noma ukuquleka ubheke amadoda, ukwesaba isifo esithathelwana ngobulili. Noma yimuphi isici ngokwengqondo uyakwazi ukubulala ikhono sowesimame sifinyelele eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili. Futhi, ukungakwazi ukufinyelela eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili ngezinye izikhathi siboniswa umuzwa lwaluyophola umbhangqwana. Kuyadabukisa ukuthi imibhangqwana eminingi ngemva inombolo Nth zeminyaka ngomshado sebeqala ukuzizwa ke pholisa, okuyinto okunzima kakhulu ngiphendukele imizwa ubudala abanothando. Kuyinto, eqinisweni, cishe akunakwenzeka, ngoba idinga omningi ku ngokwami kanye isifiso ukusindisa umshado ngokuzisiza bobabili abashadile.
yokungakwazi ukufunda nokubhala ngokocansi. Uma umuntu aya naye ocansini owesifazane akwanele ukuze ajabulise isenzo lesi sabizwana, noma yena ogodla imizwa yakho, kuyoba kuyawuphofisa kakhulu isipiliyoni ngokobulili. Lapho abafundile owesifazane emkhakheni ngokocansi, injabulo okukhulu ngaphezulu yena ungathola yena futhi ukuletha lo muntu. Kulokhu-ke akuyona mayelana nenani labantu ozibandakanya nabo kwezocansi futhi iningi isiko ocansini.
Physiology kanye nokuntuleka orgasm kwabesifazane
Disgamiya. Omunye izimo ethandwa kakhulu lapho ukuntuleka orgasm besifazane ngenxa ukungavumelani ngokobulili naye. Ngokwesibonelo, umthondo mikhulu kakhulu noma mincane abesilisa noma ejaculation ngokushesha kakhulu. Yathandwa ukuthi abesifazane kudingeka isikhathi kabili njengoba amadoda ukuba azame ukufinyelela eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili. Nokho, ingxoxo uthembeke nomlingani wakho, le nkinga luqedwe.
Isexwayiso! ososayensi Japanese bathole ukuthi ayanda ingqondo womuntu, kunzima kakhulu kangakanani ukuba ngehlise umoya futhi bazinikele amandla izinzwa.
izinkinga bokuphila. Azalwa naso isitho sowesifazane somile, ukuvuvukala, ukuvuvukala izifo ezithathelwanayo kwesimiso sokuzala kungabangela ubuhlungu ngesikhathi socansi, okuyinto negates injabulo. Indima ebalulekile ekufezeni isiqongo injabulo edlala futhi hormone, isimo okuyinto kuthonywa izici eziningi.
Izizathu yokuntuleka orgasm lwesitho sangasese sowesifazane kubantu besifazane kungaba ngenxa elide phakathi clitoris futhi sangasese. Eyokuqala kuleli cala, cishe awekho umthondo ziyashukumiseka.
Ukuze kwabesifazane nabesilisa orgasm kubaluleke kakhulu empilweni. Abantu isikhathi eside bancishwa ubulili, uhlushwa ukuqwasha futhi ucasukile, futhi yokujama tsi kwezitho okhalo Uphatha kabi umsebenzi wabo. Abesifazane ungakwazi futhi ukuphazamisa abangenangqondo ekuqaleni emehlweni migraine.
Ochwepheshe uqaphele ukuthi ukuntuleka ubulili omubi kuthinta orgasm - injabulo iza kancane nzima ukufinyelela eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili.
Anorgasmia kwabesifazane - indlela yokulungisa le nkinga?
Psychology. Ukuze uqale, ukucacisa isizathu yokuntuleka eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili. Uma isici ngokwengqondo itholakala inkinga, ngizame ukukuqonda. Lapho izimbangela ngokwengqondo anorgasmia ukubhekana bebodwa nangomkhumbulo wabo enganakile kakhulu, kunzima kakhulu. Kulokhu, kangcono baphendukela sexologist, ngubani uzokwazi ukuthola umnyombo wenkinga bese uphakamisa indlela efanele ukuze siyixazulule. Nokho, khumbula ukuthi umuntu angakwazi ngokuphelele konke, uma ngempela ufuna, futhi kungakhathaliseki kwakunzima futhi ephelelwe yisikhathi kanjani hhayi block enu engqondo - intando yakho namanje namandla.
Okwamanje isikhalazo olusentshonalanga waya sexologist akusabonakali angavamile. Kodwa lezi zithandani, babengenakho okuhlangenwe nakho nale amakhono okungenzeka kube novalo, namahloni, kuphumele nomthelela omubi imiphumela yokwelapha ocansini.
izici yokwakheka. Lapho bikho orgasm ngenxa izici yokwakheka, zama ukusebenzisa. Ngokuvamile, lolu hlobo nkinga aqede ushintsho ukuma, okuyinto kuzothinta kakhulu ngaphezulu kuze kube seqophelweni G. Funda umzimba siqu - futhi uzothola isisombululo. Mhlawumbe udinga ukuthuthukisa ukushukuma ngokocansi umthelela ezijulile phezu clitoris.
Ukuzivocavoca eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili. Kuyinkolelo eyamukelwa abaningi ukuthi usebenzise izivivinyo. Okokuqala Yiqiniso, Kegel umsebenzi, okuyinto ikuvumela ukuba aqeqeshe imisipha lwesitho sangasese sowesifazane kanye ukwandisa igazi ligeleze ezithweni kwezitho zangasese. Ngenxa yalokho, emizweni ngokucace nakakhulu enikeziwe hhayi kuwe kuphela kodwa futhi umlingani wakho. Funda ukwenza lezi umzimba silula - into esemqoka lapha ukwenza ukuvivinya umzimba njalo.
Ngaphezu kwalokho, abantu ngokuvamile ukuzijayeza of imikhuba ezingokomoya zesifazane, kutuswa ukuba uzame eziyinkimbinkimbi "eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili Reflex", okuyinto luqhutshwa yiningi abesifazane abaningi. Kunzima ngempela emzimbeni, ngoba umsebenzi ngamunye wenziwa imizuzu 10-15. Ngenxa yalokho, ngaphandle ukuqeqeshwa ngaphambi ngokomzimba ukwenza eziyinkimbinkimbi akunakwenzeka ngokuphelele. Nokho, "eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili reflex" akhulule ngempumelelo amandla ngokobulili. Girls, uyizame, ukukhuluma ngalokhu amasu angaphezu kuka omuhle. Buka izibonelo umzimba unga Larisa Renard.
Yini ukwelashwa ukwenze ochwepheshe?
Imithi. Ephambi kwezinduna izinkinga gynecological okuyinto kwakuhilelani ukungabi orgasm, ukwelashwa kufanele ngokujwayelekile medicated. Kwaba ngemva ukuqedwa isifo, ungakwazi ukugxila kokuthola orgasm. Lungisa hormone wakho, gwema sithole nokuthi zibangelwa yini yona oscillate, ukwelapha izifo ukuvuvukala, uma bengahlali zenzeka.
Futhi, odokotela ngezinye izikhathi akunikeze imithi, ingqondo - sedatives, antidepressant, uma kudingeka.
Inqubo. Odokotela ngezinye izikhathi belulekwa ukusebenzisa izindlela ezifana ukushukuma kagesi, hydrotherapy, massage vibratory. Lezi zinqubo babelwa ochwepheshe ngabanye.
anorgasmia Ukwelashwa ezingabantu
In amadoda, anorgasmia kwenzeka redk.o kakhulu Kodwa lapho ebhekene nenkinga efanayo, unquma ukuya kudokotela, ngokuvamile kuba nzima kakhulu kunalokho nezimo leminyenti ngaloku abesifazane. Shame akufanele kukuvimbele ukujabulela ukuphila ngokobulili, njengoba anorgasmia igcwele eziyingozi, kuze umdlavuza, ingasaphathwa yokuthi bikho orgasm ezingabantu kuholela ukuwohloka ebuhlotsheni nomlingani noma oshade naye.
Khumbula! "Phatha" anorgasmia izidakamizwa ekhuphula potency, akufanele, njengoba lokhu akusho ukuxazulula inkinga - wena kuphela okwesikhashana ukukhohlwa ngakho.
Uma kukhona umuntu elimele, isikhalo Umeluleki noma sexologist kunesidingo. Kwangathi ukusiza ukuqeqeshwa akhululayo, ukuluthwa ingqondo, ukwelulekwa umndeni. Futhi-ke, kubaluleke kakhulu ukuthola inkinga, okwaholela yesibili anorgasmia hlobo. Okokuqala, kufanele cishe uphumule, thatha ikhefu emsebenzini, ukuze nginciphise ukucindezeleka futhi ekugcineni ukujabulela wangempela, eliphezulu ocansini. Kodwa ukuntuleka orgasm ezingabantu akuyona njalo zibangelwa ngenxa yokusebenza ngokweqile.
Physiotherapy. Abesilisa kuyabekwa izindlela ezifana ukutshopa, ukwelashwa kwamathambo, ukukhuthazwa kagesi, vibratory massage and hydrotherapy. Kukhona izinhlobo eziningi zezidakamizwa ezingasiza kule sifo ngokudipha esithinta ingqondo.
Anorgasmia - kuyinkinga enkulu ukuthi akufanele neze kushaywe indiva. Funda umzimba wakho futhi ungakhohlwa ngezidingo zakhe. Kuphela uma wena ngokuthula nangokuzwana nomunye, uyojabula ngempela.
Ukucabanga Mayelana Uhlobo zabesilisa, imisipha nabesifazane zofuzo Hlunga
Frank ingcikitsi lokho orgasm?
Uhlelo womshini lwezimpawu kanye izitembu
Zonke izikhathi Turkey: kanjani ukuqonda, singakanani isikhathi kuba khona?
Kuphi futhi kanjani ukuthola umuntu ngegama
Ihhotela laseStaccoli 3 * (Rimini) - isithombe, incazelo, amanani nezibuyekezo
Meaning of igama Mohammed futhi ubuntu bakhe
Summer Cottages Module izakhiwo sekuqala ukufudumala elalinesitofu, a Veranda futhi eshaweni
Amadodakazi ka-Bill Gates: biography nezithombe